Clark Gregg – Stars – Channel Myanmar
(500) Days of Summer (2009) IMDb (7.7) Rotten Tomatoes (85%) ဇာတ်လမ်းကိုတော့ Movies-we watch,we feel. Facebook Page မှ Ko Waihin Htoon ရဲ့ ခံစားမှုဆောင်းပါးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ --------------------------------------------------------- (500) Days of Summer အား တကျော့ပြန် ခံစားကြည့်ခြင်း (review မဟုတ်ပါ။ ဇာတ်ကားကို ကြည့်၍ ခံစားချက်များကို ရေးသားထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။) အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ခံစားတတ်သူတိုင်း အချစ်ကို ခံစားတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားချက် မရှိတဲ့ မည်သူရှိလဲ? မည်သူမှ မရှိပါ။ လူတိုင်းဟာ ခံစားချက်တွေရှိတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ဒါဆိုရင် လူတိုင်းဟာ အချစ်ကို ခံစားဖူးကြမှာပေ့ါ။ အမှန်ပါပဲ။ လူ့ ဘဝရဲ့ တစ်ချိုးတစ်ကွေ့ မှာတော့ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ဆက်နွယ်ခဲ့ဖူးကြတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အချစ်ဆိုတာဘာလဲ? မည်သူမှတော့ တိကျတဲ့ အဖြေကို မပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကပဲ ...
IMDB: 7.7/10 420,861 votes